डबल बल रूले | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! डबल बल रूले | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
रूले पक्कै संसारको सबैभन्दा प्रशंसा क्यासिनो खेल मध्ये एक छ, अक्सर सेलिब्रेटीहरू र धन द्वारा प्ले तर जो कोहीले खेल्न र पैसा को एक विशाल योगफल जित्न सक्छौं. यो खेल को प्रशंसक लागि एक राम्रो खबर छ; डबल बल रूले आफ्नो भाग्य गुणा दुई बलमा एक मोड संग एक क्लासिक खेल. यो रूले तपाईं क्यासिनो के जीत राख्न खेल पनि जहाँ तपाईं प्रति खेल £ 2000 सम्म जित्न सक्छौं पक्ष बाजी राख्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ. यो खेल £ 0.10 को न्यूनतम शर्त रकम र अधिकतम £ 50 भित्र शर्त र £ 1000 को बाहिर लागि हुनुको आवश्यकता. डबल बल शर्त नै नम्बर को लागि £ 10 को न्यूनतम र अधिकतम रूपमा £ 0.10 र £ 1 अधिकतम Jackpot लागि सीमा छ.
डबल बल रूले विकासकर्ता बारेमा:
विकासकर्ता महसुस गरिएको छ, अनलाइन मंच लोकप्रिय क्यासिनो खेल ल्याउन यसको पूर्णता लागि चिनिने गेमिङ कम्पनी. तिनीहरूले विभिन्न संस्करण सिर्जना गरेका रूले तपाईं क्यासिनो के जीत राख्न खेल तपाईं आफ्नो भाग्य र वास्तविक पैसा जित्न सक्छौं.
यो रूले तपाईं क्यासिनो के जीत राख्न खेल दुई बीच एक निश्चित समय खाली संग अन्य गरेपछि दुई बलमा एक साथ spins. तपाईं चयन एक नम्बर को लागि त, एक बल सम्झना गर्छन भने अन्य एक अझै पनि आफ्नो भाग्य गर्न रोलिङ रहन्छ. यदि त्यो पर्याप्त छैन, तपाईं पनि एक पक्ष शर्त जहाँ तपाईं साथ आफ्नो भाग्य र सम्म जित्न सक्छौं छ 2000 गर्न 1 आफ्नो शर्त रकम. यो खेल को सबै भन्दा राम्रो भाग तपाईं लन्च लागि पूर्व निर्धारित समय कुनै पनि समयमा पूर्व गोली मार गर्न सक्छन् रूपमा दोस्रो बल पूर्ण नियन्त्रणमा छ छ. यो तपाईं आफ्नो चुनिएको संख्या एक खास मा बल जारी र घनिष्ठ प्राप्त गर्ने मौका दिन्छ.
को Jackpot शर्त: यस मा तालिका जस्तै छुट्टै जाति ट्रयाक छ रूले तपाईं क्यासिनो के जीत राख्न बाट नम्बर खेल0गर्न 36 वरिपरि र तपाईंले शर्त कुनै पनि वा सबै संख्या छनोट गर्न सक्नुहुन्छ. के तपाईं यस राउन्ड जीत आवश्यक तपाईं रोजेको दुवै बलमा संख्या देखि एक नम्बर मा उतरने मा छ. जस्तै; यदि तपाईं रोजेको7र दुवै बलमा मा जमीन7त्यसपछि तपाईं देखि अधिकतम शर्त £ 1 छ जीत £ 2000. तालिका अधिकतम £ 50 छ र आफ्नो पक्षमा शर्त यो रकम नाघ्नु हुँदैन.
छिमेकी बाजी: यो जहाँ तपाईं पनि आफ्नो चुनिएको नम्बरको छिमेकी मा शर्त प्राप्त यो रूले अर्को सुविधा छ. तपाईं आफ्नो मुख्य नम्बर को या त पक्षमा दुई नम्बर चयन र प्रत्येक स्पिन समयमा विजेता को आफ्नो संभावना बढाउन सक्छ.
सारांश: यो रूले तपाईं क्यासिनो के जीत राख्न खेलको प्लेयर एक फिर्ती छ 97.30% र तपाईं बनाउन प्राप्त सट्टेबाजी विकल्प को विभिन्न संयोजन जित्न सक्छौं. यो खेल मा दुई बलमा आफ्नो विजेता संभावना डबल र irresistible बनाउन.